धनगढीमा थप २ जनामा देखियो कोरोना पोजेटिभ, स्वाब काठमाडौं पठाइयो — Sanchar Kendra
१सकियो नेकपाको हाइकमाण्ड बैठक, के भयो निर्णय ?
२आज पनि थप यति धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ? थप विवरणसहित
३ओलीलाई कसले दियो सुरक्षा थ्रेट ? गृहको यस्तो रिर्पोटिङ गरेपछि चाले कडा कदम
४धुम्बाराहीमा बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमै बस्ने
५आज फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
६कोरोना महामारीलाई लिएर विश्वमा भयो अर्को डरलाग्दो पुष्टि, अब के हुन्छ ?
७काठमाडौंका यी स्थानमा आज दिनभर बिजुली नआउने
८रोजगारीका लागि बिदेश जान चाहानेहरुलाई खुसीको खबर, तर पालना गर्नुपर्नेछ यस्तो नियम
९नेकपा हाइकमाण्ड बैठक बस्दै, प्रचण्डलाई बहुमत आउने निश्चित भएपछि यस्तो छ ओली समुहको तयारी
१०राजतन्त्रको पक्षमा कसले गर्दैछ देशभर श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शन ? के हो खास रहस्य
११आज २०७७ मंसिर १६ गते मंगलबार, यी राशिका लागि हुनेछ एकदमै शुभ, कुन राशिलाई छ तनाव ?
१२९ महिनापछि नेपालीहरुका लागि खुसीको खबर, पुस १ देखि लागु हुनेगरी सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय
धनगढीमा थप २ जनामा देखियो कोरोना पोजेटिभ, स्वाब काठमाडौं पठाइयो
काठमाडौँ । धनगढीको पिसिआर मेसिनमा परीक्षण गर्दा रूकुम पश्चिमका दुई जनामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डम्बर खड्काले धनगढीको प्रयोगशालामा उनीहरूको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएपछि फेरि परीक्षण गर्न काठमाडौं पठाइएको बताए।
धनगढीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएका उनीहरू केही दिनअघि भारतबाट आएका थिए। डाक्टर खड्काका अनुसार उनीहरू अहिले होम क्वारेन्टिनमा बसेका छन्।
नेपालमा अहिलेसम्म १६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १ जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले धनगढीमा ५, वीरगन्जमा ४, बाग्लुङमा २, टेकु र पाटन अस्पतालमा २/२ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
यस्तै र्‍यापिड टेस्ट गर्दा कोरोना एन्टीबडी पोजेटिभ देखिएका झापा हल्दीबारीमा युवकमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ । विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको प्रयोगशाला ती युवकको थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण नभएको देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाका महामारी फोकल पर्सन एवं जिल्ला विपद व्यवस्था सहायता कक्षका सचिव जीवन चौलागाईले जानकारी दिए ।
यसअघि झापाको हल्दीबारीमा बुधबार र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट परीक्षण गर्दा ती युवकमा कोरोना एन्टीबडी पोजेटिभ देखिएको थियो ।
त्यसपछि ती युवकसहित उनको परिवारका सदस्य र आफन्तसहित २१ जनाको स्वाब संकलन गरी प्रयोगशाला पठाइएको थियो । अरुको रिपोर्ट भने आउन बाँकी छ ।